Uyini umkhuba wamanani entengo eluhlaza okwezimboni ngo-2021?
Lokhu kuphakama kuveza izici ezintathu Ezithintwe ubhadane lwango-2020, kusukela engxenyeni yesibili yonyaka, izinto ezahlukahlukene zezimboni eziluhlaza nezisizayo zikhombise ukuthambekela okuphelele okuphezulu, futhi amanani entengo yemikhiqizo ehlukahlukene ephindaphindeke kakhulu. Ngo-2021, ngokuya ngokufanele ku ...
Isimiso esisebenzayo se-thermometer ye-elekthronikhi
I-thermometer ye-thermoelectric isebenzisa i-thermocouple njengesici sokulinganisa izinga lokushisa ukukala amandla e-thermoelectromotive ahambelana nethempelesha futhi inani lokushisa liboniswa yimitha. It is kabanzi ukukala lokushisa uhla -200 ℃ ~ 1300 ℃, futhi unde ...
Umqondo ovamile wokugcina okubandayo nendlela yokukhetha
Umqondo ovamile wokugcina amakhaza nendlela yokukhetha Ngokuthuthuka okusheshayo komnotho wezwe lami, imishini yesiqandisi ingene emikhakheni ehlukahlukene enjengezitolo ezinkulu, ezentengiselwano, ezolimo nezimboni, futhi ihlobene kakhulu nezimpilo zethu. Ngenxa yokuthuthuka okusheshayo kwe-refrige ...
Ukukhishwa okusha komkhiqizo
Ibhokisi lokulawula izwi likagesi elisha elisanda kukhiqizwa kulula ukulenza, intengo iyavuma, futhi ukujabula kwekhasimende kujulile. Imininingwane imi kanje: Lesi silawuli sizama ukulawula izinga lokushisa kwesitoreji esiphakathi nendawo kanye namakhaza asezingeni eliphansi. Kungishisa ...
Ukwethulwa kwamalambu okugcina abandayo
Cold isitoreji isibani uhlobo isibani okuthiwa ngesimo ukusetshenziswa isibani. Isetshenziswa kakhulu ekugcineni okubandayo, ekugcineni okubandayo, efrijini nakwezinye izindawo lapho izinga lokushisa elincane liphansi kakhulu, linomswakama omningi, nalapho kudingeka ukuphepha kukagesi nokuvikelwa kwemvelo. Ngentuthuko ...
Yini i-Temperature Controller futhi isebenza kanjani?
Yini i-Temperature Controller futhi isebenza kanjani? Q: Uyini Umlawuli Wokushisa futhi usebenza kanjani? A: Isilawuli sokushisa yidivayisi esetshenziselwa ukulawula ukushisa. Ikwenza lokhu ngokulinganisa kuqala izinga lokushisa (inqubo iyahluka), bese ilifanisa ne-val oyifunayo ...
Isimiso sokulawula i-thermostat ngogesi
Ukuthuthuka okusheshayo kwesayensi nobuchwepheshe ngokungangabazeki kulethe okuningi okuhle ezimpilweni zethu. Ukusungulwa nokuthuthukiswa kwemishini eminingi yokulungiselela ukusinda kwabantu bethu. Manje ngizokuchazela ithuluzi elibizwa ngokuthi isilawuli sokushisa. Njengoba igama liphakamisa, t ...
Isimo se-quo nentuthuko yomkhakha wefriji nefriji
Okubizwa nge- “refrigeration” ukusebenzisa indlela ethile yokwenza into ethile noma isikhala sifinyelele izinga lokushisa elingaphansi kwesilinganiso semvelo esizungezile phakathi nesikhathi esithile, futhi ngasikhathi sinye, singagcinwa ngaphakathi kwezinga lokushisa elicacisiwe ububanzi. Lokhu ...
Kungani i-chip global iphelelwe isitoko? Kunezici ezintathu ezibalulekile ngemuva kwayo, okwenzeke kubo bonke ukuhlangana
Kusukela kwikota yesine yonyaka we-2020, ama-chips aphelile, futhi ngo-2021, sekuya ngokuya kuba kubi kakhulu. Hhayi kuphela ama-chip car car aphelile, kepha wonke ama-chips aseqalile ukuphuma esitokweni, futhi yonke imboni ye-semiconductor ithintekile. Empeleni, selokhu kwasungulwa i-chip, i ...
I-32nd China Refrigeration Exhibition yaphela ngempumelelo eShanghai
Ixhaswe ngokubambisana yiChina Council for the Promotion of International Trade Beijing Branch, China Refrigeration Society, China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, Shanghai Refrigeration Society neShanghai Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, i-32nd Internat ...
i-aquarium thermometer yedijithali, isilawuli sokushisa se-thermostat, ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, isilawuli sokushisa se-incubator, i-thermometer yedijithali, isilawuli se-digital thermostat,